Horudhac: Crystal Palace vs Manchester City… (Kooxda Sky Blue oo doonaysa inay ka soo kabato guuldarradii ka soo gaartay Wolves) – Gool FM
(London) 19 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Crystal Palace ayaa soo dhoweynaysa naadiga Manchester City caawa kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Manchester City ayaa go’aansan doonta inay dib u hesho difaacashadooda horyaalka Premier League marka ay u safraan garoonka Selhurst Park si ay ula ciyaarayaan caawa oo Sabti ah kooxda Crystal Palace.
Kooxda heysata horyaalnimada Ingiriiska ayaa la kulantay guuldaradoodii labaad ee xilli ciyaareedkan markii ay khasaaro 2-0 ka soo gaartay Wolves ka hor fasaxa ciyaaraha caalamiga, taasoo ka dhigtay inay siddeed dhibcood ka dambeeyaan hoggaamiyaasha horyaalka haatan ee Liverpool kaddib siddeed kulan oo la ciyaaray.
Crystal Palace ayaa soo dhoweynaysa kabtankeeda Luka Milivojevic oo dib ugu soo laabanaya, kaasoo ganaax kaga maqnaa guushoodii ugu dambeysay oo ay ka gaareen West Ham United.
Mamadou Sakho ayaa markale ka sii maqnaan doona kooxda Palace kaddib dhaawac muruqa ah oo uu qabo, halka Connor Wickham uu sidoo kale sii maqnaan doono.
Manchester City ayaa qarka u saaran inay dib u hesho Kevin De Bruyne, John Stones iyo Benjamin Mendy oo soo laabanaya kaddib dhaawacyo ay la maqnaayeen.
Sergio Aguero oo shil baabuur galay dhowaan ayaa taam buuxa u ah inuu ciyaaro kulankan, Aymeric Laporte iyo Leroy Sane ayaana maqnaanshahooda mudada dheer sii wadan doona.
>- Crystal Palace ayaa qaadatay afar dhibcood oo ay ka heshay saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka oo ay wajahday kooxda Manchester City.
>- Yeelkeede, The Eagles ayaa guul la’aan ah afartii kulan oo ay garoonkeeda kula ciyaartay kulammada horyaalka kooxda Man City, waxaana ay Sky Blue kala kulantay 1 barbaro iyo 3 guuldarro.
>- Kooxda The Eagles lagu naanayso ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay saddex ka mid ah afartii kulan ee ay kulammada horyaalka ku ciyaartay garoonkeeda Selhurst Park xilli ciyaareedkan.
>- Man City ayaa gool dhalisay 15 kulan oo xiriir ah oo ay bannaanka ku soo ciyaartay kulammada horyaalka oo ay ku jiraan labo gool ama wax ka badan oo ay meel ka baxsan garoonkeeda ku soo dhalisay horyaalka mid kasta oo ka mid ah afartii kulan ee ugu dambeeyey.
>- Sergio Aguero ayaa lix kulan oo horyaalka Premier League ah ku ciyaaray garoonka Selhurst Park, welina gool kuma uusan dhalin.
>- Kevin De Bruyne ayaa caawiye ka ahaa siddeed kulan oo horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, waana in labo caawin ka badan ciyaaryahan kasta oo kale.
Horudhac: Juventus vs Bologna... (Kooxda Juve oo doonaysa inay sii haysato hoggaanka horyaalka Serie A)